घटना - मेरो खबर -
लहान, १८ माघ । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ स्थित एक कम्प्युटर पसलमा आज बिहान आगलागी हुँदा रु तीस लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । गोलबजार नगरपालिका–३ का सुधिर साहको कम्प्युटर पसलमा रहेको इन्भर्टरबाट विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको हो । आगलागीबाट साहको पसलमा रहेको सम्पूर्ण कम्प्युटर तथा अन्य सामान जलेर नष्ट हुँदा करिब रु ३० लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । आगलागी स्थानीयवासी र प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । रासस ...
होटलमा पुरुष मृत फेला, सँगै आएकी महिला फरार
काँकडभिट्टा (झापा), १७ माघ । झापाको बिर्तामोड बसपार्कस्थित बी एन्ड वाई होटलमा एक व्यक्ति मृत फेला परेका छन् । बिर्तामोड इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीका अनुसार होटलको २०७ नं कोठामा हिजो साँझ ७ बजेतिर सुरुङ्गा–५ का ५० वर्षीय मनोरथ पाठक मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । माघ ११ गतेदेखि होटलको कोठा बुक गरी एक अपरिचित महिलासँग बस्दै आएका पाठकलाई साँझपख मृत देखेपछि होटल सञ्चालकले प्रहरी बोलाएका थिए । कोठाको ओछ्यानमा मृत भेटिएका पाठकको शरीरमा कुनै बाहिरी चोटपटक नदेखिएको हुँदा मृत्युको कारण हत्या हो कि होइन अहिल्यै भन्न नसकिने...
घडियाल गोहीहरु हराए
चितवन, १७ माघ । सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोही बर्सेनि विभिन्न नदीमा छाडिँदै गएको भए पनि यसको सङ्ख्या भने बढ्न सकेको छैन । सन् १९७८ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको कसरामा गोही प्रजनन केन्द्र स्थापना गरी निरन्तर यसको संरक्षणमा सरकार लागेको भए पनि नदीमा छाडिएका गोही दिनानुदिन घट्दै गएका छन् । नदीहरुमा प्रजनन हुने र सङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा उल्टो छोडिएका गोही पनि हराउँदै गएका हुन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत वेदबहादुर खड्काकाअनुसार हालसम्म छवटा नदीमा एक हजार ५६ वटा गोही छाडिसकिएको छ । राप्ती नदीमा ३७६, नारायणी नदीमा ३९९,...
पेट्रोलियम पदार्थसहित कालोबजारी गर्ने पाँच पक्राउ
भक्तपुर, १५ माघ । पेट्रोलियम पदार्थ कालोबजारी गर्ने पाँच जनालाई एक हजार ६०० लिटर पेट्रोल, ग्यास र पेट्रोल बोक्ने गाडीसहित आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महिनौँदेखि पेट्रोल र ग्यासमा कालोबजारी गरेको सूचना आएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातिका प्रहरी नायब उपरीक्षक मित्र बन्धु शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले बढी मूल्य लिएर ग्यास र पेट्रोल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा ती पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउपर्नेमा भक्तपुर नगरपालिका–७ गोल्मढी घर भई कमलविनायक बस्ने ८० वर्षीय विक्रेता कृष्ण तजले, सिरहा धनगढी–२ घर भई भक्तपुर थिमि नगरपालिका बस्ने २९ वर्षीय...
राष्ट्रपतिको हत्या योजना बनाएको अाराेपमा माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति पक्राउ
कार्तिक ७ ।माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति अहमद अदीव पक्राउ परेका छन् ।राष्ट्रपति अब्दुब्लला यामीनको हत्या योजना रचेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । गृहमन्त्री उमर नसीरले उनीमाथि राजद्रोहको आरोप लगाइएको र जेलमा राखिएको बताएका छन् । यामीन पछिल्लो महिना भएको हमलामा बचेका थिए । ...
प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने जुवाडे पक्राउ
गौशाला, ६ कात्तिक । प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने एक जुवाडेलाई महोत्तरी प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बिजलपुरा–९ बस्ने रविन्द्र घोरारी रहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासबाट खटिएको टोलीले बिजलपुरा–९ स्थित पथलैया बजारमा जुवा खेलिरहेका जुवाडेहरुलाई बिहीबार अबेर राति पक्राउ गर्न खोज्दा जुवाडे र प्रहरीबीच केहीबेर झडपसमेत भएको थियो । जुवाडेहरुले एकतर्फी रुपमा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए । ढुङ्गामुढाबाट प्रहरीको गाडीमा समेत सामान्य क्षति पुगेको छ भने जुवाडेहरुले प्रहरी हबल्दार बरुण भूमिहारलाई कुटपीट गरी घाइते बनाएका छन्...
कैलालीमा दुई जनाले आत्महत्या गरे
धनगढी, ६ कात्तिक । कैलाली जिल्लामा बिहीबार दुई महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–३ की २४ वर्षीया गीता सार्कीले आफ्नै घरको कोठामा झुन्डिइ आत्महत्या गरेकी छन् । मृतक सार्कीको शव परीक्षणका लागि सेती अञ्चल अस्पताल पुर्‍याइएको छ । यसैगरी, उर्मा गाविस–७ की ४० वर्षीया तारादेवी बूढामगरले घर नजिकैको रुखमा झुन्डिइ आत्महत्या गरेकी छन् । प्रहरीले यी घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान थालेको छ । रासस ...
महोत्तरीको सीमा क्षेत्रमा एसएसबी र भारतीय मुस्लिमबीच झडप
कार्तिक १, २०७२- महोत्तरी स्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र समसीको पारी कन्हमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र त्यहाँको मुस्लिम समुदायबीच झडप भइरहेको छ । एसएसबीले भारतको बिहार राज्यमा प्रतिबन्धित गाईको मासु लिएर नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका एक भारतीय मुस्लिमलाई नियन्त्रणमा लिई मासु नष्ट गरेकोले झडप सुरु भएको समसी सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीले जानकारी दिएको छ । झडपका कारण एसएसबीले प्रदर्शनकारी माथि ४६ राउन्डभन्दा बढी गोली प्रहार गरेको प्रहरीले एसएसबी श्रोतलाई उदृत गर्दै बताएको छ । प्रदर्शनकारीको ढु‌गा लागि दुईजना एसएसबी र एक सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् ।...
BREAKING NEWS: नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस हङकङमा ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो
आश्विन ३०, २०७२- नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस हङकङमा ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस ए ३२०–२०० जहाज हङकङमा स्थानीय समयअनुसार साँझ सवा ७ बजे हङकङ इन्टरनेसनल विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने थियो । तर, उड्ने बेलामा जहाजमा प्वाल परेको थाहा भएको थियो । विमान चालक क्या. विजय लामाका अनुसार खाना पुर्‍याउन आएको गाडीले जहाजलाई ठक्कर दिएर प्वाल पारेको थियो । तर, जहाजमा केही नभएको भन्दै गाडी बाहिरियो । उड्ने तयारी गर्दा क्या. लामाले जहाजमा भ्वाङ परेको पत्ता लगाएका थिए । ‘यदि जहाज उडेको भए निश्चित उचाई लिंदा जहाजभित्र हावा पस्ने थियो,’ सम्भावित दुर्घटनाबारे...
भारतमा सत्तारुढ भाजपा विधायकहरुले स्वतन्त्र विधायकलाई सदनमै पिटे
काठमाडौं, असोज २१ । भारतको जम्मु–कश्मिर विधानसभामा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विधायकहरुले स्वतन्त्र विधायक राशिदलाई सदनभित्रै पिटेका छन् । राशिदमाथि हिन्दूहरुले लक्ष्मीको रुपमा पूज्दै आएको गाईको मासुसहितको भोज आयोजना गरेको आरोप लगाइएको छ । भोजकै समयमा केही भाजपा विधायकले त्यही प्रदर्शन गर्दै खानाको स्टल नै तोड्ने प्रयास गरेका थिए। कश्मिरमा गाईको मासु खान र बेचविखनमा लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयमा बोल्न खोज्दैगर्दा राशिदलाई भाजपा विधायकहरुले पिटेको बताइएको छ । सदनमा यस विषयलाई लिएर केही समययता बहस भैरहेको थियो । राज्यका �...
अफगानिस्तानको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, ९ को मृत्यु, ३७ जना गम्भीर घाइते
काठमाडौं, असोज १६ । अफगानिस्तानको कुन्दुज सहरमा गरिएको हवाई आक्रमणमा स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था डाक्टरर्स विदाउट बोर्डर (एमएसएफ)का ९ जना कर्मचारी मारिएका छन् । विस्फोटमा परी कम्तिमा ३७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १९ जना एमएसएफका कर्मचारी छन् । अमेरिकी लडाकू विमानले करिब ३७ मिनेटसम्म गरेको हवाई आक्रमणका क्रममा अस्पतालमा बम खसेको थियो । बम विस्फोटको समय क्लिनिकमा एक सयभन्दा बढी बिरामी थिए । आक्रमणपछि केही कर्मचारी र बिरामीको अवस्था अज्ञात रहेको छ । अस्पताल ध्वस्त भएको बताइएको छ । गत सोमबार मात्र तालिबान लडाकूले...
चिनियाँ सेनाले भारतलार्इ भन्यो-सीमानामा गडबडी नगर
एजेन्सी : चिनियाँ सेनाले दुबै देशको सीमाक्षेत्रमा गडबडी नगर्न भारतलार्इ चेतावनी दिएको छ । विवादास्पद भूमि लद्दाखस्थित सीमानामा आफूले राखेका सीसी क्यामेरासहितका अस्थायी संरचना भारतीय सेनाले हटाइएदिएपछि चिनियाँ सेनाले सीमामा गडबडी नगर्न भारतलार्इ चेतावनी दिएको हो । लद्दाख क्षेत्रमा चीनले बनाएका अस्थायी ढाँचाका संरचना भारतीय सेनाका जवानले केही दिनअघि हटाइदिएपछि चीनले बिहीबार त्यसबारेमा कडा प्रतिक्रिया दिएको हो । चीनको सेनाले भारतीय सेनालार्इ सीमावर्ती इलाका स्थिरता र शान्ति खलबलिने कुनै पनि किसिमको 'एकतर्फी कारबाही' नगर्न भनेको हो । चिनियाँ...